Ghọta ụdị ọhụrụ nke Covid-19 – omicron: Kpachara anya maka nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi! – JucelinoLuz
“Naanị nje na-egbu egbu bụ ozi na-ezighi ezi…”
Ọ nwere onye na-agha ụgha nye ndị bi n’ụwa?
Águas de Lindoia, Nọvemba 25, 2021
Nrọ na-ekpughe na ụdị ọhụrụ a na-adịghị ahụkebe adịghị adị, ọ pụghịkwa ibu ibu nke ukwuu n’ihi na ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke mmụgharị, n’otu oge ahụ, akụkụ nke ọzọ na-egosi nnukwu enyo (ihe ngosi) nke ojiji nke ọhụrụ a ifegharị, ka. ịmanye ndị mmadụ ka a gbaa ndị mmadụ ọgwụ mgbochi – ihe ha kacha achọ bụ ịgba ndị na-abụghị ndị ọrịa ọgwụ mgbochi – mere ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya dị egwu na ụdị ọrụ arụ ọrụ – dịka akwụkwọ ozi e dere na 2020, nke anyị ga-egosi n’okpuru. Agbanyeghị, ụdị B.1.1.529 nke coronavirus, nke ndị nyocha South Africa chọpụtara n’ụzọ dị ịtụnanya, na-abịa n’oge mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi megide Covid-19 na-amalite ịpụta n’ụwa niile, yana nnukwu ngagharị iwe na ngosipụta na nsonaazụ ọjọọ. na ọnwụ n’ihi mmetụta nke ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị nọọrọ onwe ha hụrụ, ya bụ, enweghị njikọ na gọọmentị ụwa na ndị ọchịchị, ma dabara na nnukwu mgbasa ozi nke mgbasa ozi na-akpali akpali nke mmalite nke 5th nke ọrịa na-efe efe n’ọtụtụ ebe. Obodo Europe. America na Asia.
Ghọta ihe ndị ọkà mmụta sayensị maralarị banyere ụdị nje ọhụrụ a… opekata mpe, ihe ha na-ekwu – anyị na-asọpụrụ, mana anyị ekwenyeghị.
Ebee ka ọdịiche omicron si abịa?
“Oké ihe nkiri nke ụfọdụ ndị ọchịchị na ndị ọchịchị ụwa haziri ka ha na-achị gị ma mee ka ike gị dịgide! “
Aha gọọmentị nke ụdị ọhụrụ a bụ B.1.1.529. Ma dị ka ụdị ndị ọzọ (alfa, beta ma ọ bụ delta), n’oge na-adịghị anya, a kpọrọ aha ya na mkpụrụedemede nke mkpụrụedemede Grik, nke a na-amara ya n’ụwa nile, n’ime awa ole na ole, dị ka ụdị “omicron”. Nke bụ aha ndị ọchịchị na ndị ọkachamara jikọtara ndị ọchịchị ụwa na-eji.
Enwere nnukwu enyo na ndị ọrụ gọọmentị (akụkụ n’ime ha) bụ ndị na-eketa ụlọ nyocha buru ibu ma yabụ na-achọ ịmanye ndị mmadụ ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla. Na ebumnuche bụ ndị a na-enyeghị ọgwụ mgbochi – kedu ka onye ahụike nwere ike isi bunye nje a? – Ọ gaghị adị mfe ịchịkwa nje ahụ!
Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) kpọbakwara ya ngwa ngwa, tinyekwa aka na nnukwu nsogbu a na-emetụta ndị mmadụ niile.
Na ha ga-agbalị iburu ibu ọrụ maka mmetụta nke ogwu ahụ na ga-ekwu na nsogbu bụ nke ọhụrụ variant – ya mere, kpachara anya na ikwere na sensationalist mainstream media na ndị ọkà mmụta sayensị, ndị dọkịta, ndị ọkachamara jikọtara ndị ọchịchị na ndị a. ọchịchị ụwa.
Ọ nweghị ụdị ọhụrụ, variants ma ọ bụ mmụgharị?
Enweghị ihe karịrị 30 mutations, dị ka ha na-ekwu, ihe dị mkpa tụnyere ndị ọzọ dị ize ndụ variants.
Nke abụọ, ọhụụ ndị na-eche echiche. ahụbeghị na delta na beta, mana ndị ọzọ amabeghị… ma anyị amaghị ihe nchikota mmụgharị a ga-adị. Nje virus na-egbu ihe ruru pasentị 0.13, ọnwụ na-abawanye site na ndị mmadụ na-anwụ site na akụkọ akụkọ ọrịa ndị ọzọ na-ekwu na nje a – kpachara anya!
Ọdịiche na-ebufe ngwa ngwa?
Mba, ọ bụrụ na anyị nwere nlekọta na agụmakwụkwọ ahụike – cheta na nje ọ bụla chọrọ onye ọbịa. Ọ na-adịkwa ndụ n’ikuku ruo awa atọ karịa.
guzogide ọgwụ mgbochi?
Ọnweghị ihe ịhụ. Ọgwụ mgbochi ndị ọnụ ọgụgụ ụwa na-ewere adịghị arụ ọrụ ma ka na-emerụ ahụ – enwere puku kwuru puku ikpe zoro ezo, n’ihi mmetụta dị n’akụkụ, nke na-agbasa kwa ụbọchị, karịa ihe niile, ọgwụ mgbochi ndị a ka bụ nnwale na mberede. Ha ga-etinye ya site na mgbasa ozi bụ isi na ụdị dị iche iche nwere ike ibelata irè ọgwụ mgbochi ruo n’ókè nke na-ekpebibeghị.
Dị njọ karịa ụdị ndị gara aga?
Nke ahụ bụ nnukwu akara ajụjụ ọzọ. Ụzọ na-arụ ọrụ iji tinyekwuo egwu na ndị mmadụ. Lee ka o si dị mwute na a ka nwere ndị kpuru ìsì ma kweta! Na-agba ọsọ dị ka ehi iji nweta nnwale ndị ahụ, ọgwụ mgbochi mberede nke dị ize ndụ nye mmadụ. Ihe na-erughị otu izu agafeela kemgbe achọpụtara ụdị dị iche iche, ma ọ na-efe site na jet supersonic ọ ga-agbasa ngwa ngwa n’ụwa niile! Chinekem, ihu abụọ ezuola? Ọ bụrụ n’ezie enwere ụdị ọ bụla, nke m ekwenyeghị, (na-egosi na …) na-agbasa ya site n’aka ndị ụlọ ọrụ ụlọ nyocha ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọrụ gọọmentị rụrụ arụ na-agbasa ya.
Okwu ikpe a abawanyela, n’ihi ihe kpatara iwu na iwu na-akwadoghị nke ha kere, nke na-enye ohere maka mmụba ngwa ngwa ma kwe ka ọnwụ ndị ọzọ sitere na akụkọ ihe mere eme dị iche iche dị ka covid19 – yana iji zere nyocha, a na-akpọ ọtụtụ ozu ọkụ.
N’ebe a na Brazil, nje a nwere ọgụgụ isi nke ukwuu, na-amafe kanival, ọ naghị ebu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọchịchị, ọ naghị agba bọs, ụzọ ụgbọ oloko, na ọdụ ụgbọ oloko juru, anaghị apụ na ntuli aka na ezumike na ekeresimesi. , New Year na nzukọ, nzuzo ọzọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọchịchị.(na-enweghị generalizing).
Ana m eji obiọma na-arịọ gị ka ị nyefee ozi a ngwa ngwa, kesaa ya na ndị enyi gị, ndị ị hụrụ n’anya na ndị ị hụrụ n’anya – n’ihi na ha na-egbochi njikọ ahụ mgbe niile, ma ọ bụ na-ekwu: – “njikọ na-adịghị mma” iji gbochie ya ịbịaru ndị ezigbo mmadụ. (ndị a ga-emerụ ahụ). Mpụ megide mmadụ! Ọ ga-abụ asịrị otu ụbọchị!
Ndo maka ndị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ugbu a, gịnị kpatara ọ ga-eji rụọ ọrụ n’ọdịnihu dị nso – ndị ọchịchị niile ekwenyelarị nke a, ọha na eze!
Nke a abụghị ebubo, kama ozi bara uru. Anyị na onye ọ bụla enweghị njikọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke na-erughịkwa na-emegide ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa – ọ bụrụhaala na ọ bụ n’ezie maka ọdịmma mmadụ. Anyị anaghị achọpụta nnukwu mmegharị ahụ maka ọgwụ mgbochi.
Ka Chukwu chebe ma gọzie unu niile!
Prof. Jucelino Luz – Onye edemede, onye nyocha, onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, onye na-eme ihe na onye ndu mmụọ
Nkag siab qhov hloov pauv tshiab ntawm Covid-19 – omicron: Ceev faj ntawm cov xov xwm loj tshaj plaws!